Umenzeli we-Yiwu - Yiwu Mia Imp & Exp Co., Ltd.
Isevisi Yomenzeli we-Yiwu
I-Yiwu idolobha elikhulu kunawo wonke lokuhweba ngempahla emhlabeni wonke. Imakethe ye-Yiwu ivula nsuku zonke ngaphandle kwe-CNY, inedumela leCanton Fair yansuku zonke. Ngezansi ukwethulwa okuningiliziwe kwenqubo yethu yokusebenza kanye nensizakalo, nemakethe ye-Yiwu, ngethemba ukuthi ungaba nemibono ethile ngemuva kokubuka konke.
Inqubo yethu Yokusebenza Nensizakalo
Eyasungulwa ngonyaka we-1982, i-Yiwu Commodity Market ingesinye sezisekelo ezinkulu zokuthekelisa impahla eChina, enezindawo zamabhizinisi ezinamamitha ayisikwele 5.5, izitolo ezingaphezu kuka-75 000 ezingaxhunyiwe ku-inthanethi izinhlobo eziyizigidi eziyi-1.8 zezimpahla, futhi iheha izivakashi zansuku zonke ezingaphezu kwezinkulungwane ezingama-210. Ibizwa ngokuthi "imakethe yezimpahla ezinkulu kakhulu kunazo zonke emhlabeni" yiNhlangano Yezizwe, iBhange Lomhlaba, uMorgan Stanley nezinye izinhlangano ezigunyaziwe.
Izimpahla ze-Yiwu Commodity Market zithunyelwa emazweni nezifunda ezingama-219. Unyaka ngamunye kuneziqukathi ezijwayelekile ezingaphezu kwezinkulungwane ezingama-570 ezithunyelwa kwamanye amazwe. Kunamahhovisi abamele unomphela amabhizinisi angaphandle angama-3,059, futhi isibalo sabosomabhizinisi bakwamanye amazwe esibahlali sidlule izinkulungwane eziyi-13.
I-UNHCR (i-United Nations High Commissioner for Refugees), uMnyango Wezangaphandle kanye nezinye izikhungo sebesungule isikhungo solwazi lokuthengwa kwempahla e-Yiwu Commodity Market.
Kusukela ngo-2006, uMnyango Wezohwebo WeRiphabhlikhi Yabantu baseChina ukhiphe inkomba ye-Yiwu-China Commodities kanye nezinga lomkhakha le- "Commodities Classification and Code" ngokulandelana, okusho ukuthi i-Yiwu Commodity Market inamalungelo athe xaxa entengo namazinga entweni yomhlaba wonke. ukuhweba.
Isifunda se-International Trade Mart 1
Isungulwe ngo-Okthoba, 2001, i-Yiwu International Trade Mart District 1 isebenza ngokusemthethweni ngomhla ka-22 Okthoba, 2002, ehlala ama-420 Mu nendawo yokwakha engama-340,000 square metres ngotshalo-mali oluphelele lwama-yuan ayizigidi ezingama-700.
Isifunda se-International Trade Mart 3
inendawo yokwakha engama-460,000 m2, ngaphezu kwamadokodo ajwayelekile angama-6000 we-14 m2 ngakunye kufulethi 1 kuya ku-3, amadokodo angaphezu kwama-600 we-80-100 m2 esitezi 4 no-5 nendawo yokukhiqiza yabakhiqizi esesitezi sesine.
Isifunda se-International Trade Mart 5
I-International Trade Mart District 5 yiphrojekthi esemqoka yekomidi leQembu likamasipala le-Yiwu kanye nohulumeni wase-Yiwu ukuze basebenzise ngokuphelele umqondo wesayensi wentuthuko, futhi baphokophele ngokuqonde phambili ekwakhiweni kwe-Yiwu njengedolobha lokuhweba likazwelonke.
Isifunda se-International Trade Mart 2
Kuvulwe ngomhla ka-22 Okthoba, 2004, i-International Trade Mart District 2 ithatha indawo yezimakethe ezingama-483 Mu nezakhiwo ezingaphezulu kuka-600,000㎡, futhi inamaqhugwane angaphezu kwama-8,000 futhi iqoqa osomabhizinisi abangaphezu kuka-10,000.
Isifunda se-International Trade Mart 4
Isebenze ngokusemthethweni ngomhlaka 21 Okthoba, 2008 Yiwu International Trade Mart District 4 ithatha indawo yokwakha eyi-1,080,000 m2 futhi iphethe amadokodo angaphezu kwe-16,000. Kuyisizukulwane sesithupha sezimakethe ze-Yiwu emlandweni wayo wokuthuthuka.
Huangyuan Izingubo Market
I-Yiwu Huangyuan Garments Market itholakala endaweni ephithizela kakhulu edolobheni lase-Yiwu. Imboza indawo ephelele ye-117 mu nendawo yokwakha engama-420,000 square metres.